Iwu nnyefe | Joopzy bụ ụlọ ahịa ntanetị kachasị n'ịntanetị maka ọtụtụ mkpa gị
Mee ọsọ ọsọ! Echefula ohere a! COUPON CODE: "15off"
30 ụbọchị afọ ojuju nkwa na Money Back Ọ bụrụ na afọ ojuju nke ngwaahịa gị, anyị ga-ewepụta nkwụghachi zuru ezu, enweghị ajụjụ a jụrụ.
Mbupu na nzipu
Anyị na-ebuga na ọtụtụ mba n'ụwa niile, maka nchịkọta niile dị na mba na mba. Ọ bụ ezie na anyị na-agba mbọ ibubata ngwa ahịa n'oge usoro ihe anyị kwuru, anyị enweghị ike ikwe nkwa ma ọ bụ nara ụgwọ maka mbịpụta nke emere na mpụga usoro oge a. Dịka anyị na-adabere na ụlọ ọrụ mbupu nke atọ iji mee ka ndị ahịa anyị na-ebuga anyị, anyị enweghị ike ịnakwere ibu ọrụ n'ihi ego akpa ma ọ bụ ụgwọ ndị ọzọ kpatara n'ihi mbugharị ọdịda ma ọ bụ na-egbu oge.
Iwu niile ga-ewe ihe dị ka 3-5 ụbọchị azụmahịa hazie. Oge mbupu anyị na-abụkarị n'ime 7-10 ụbọchị azụmahịa na USA, na 12-15 ụbọchị azụmahịa mba ndị ọzọ. Agbanyeghị, enwere ike iwe ụbọchị iri abụọ nke azụmahịa ịbịa dabere na ọnọdụ gị yana ogologo oge ọ ga-ewe iji nweta omenala gị. Jiri nwayọ rịba ama na oge nnyefe ga-adị iche n'oge ezumike ma ọ bụ obere mbido mbipụta.
Anyị enweghị ụgwọ maka mbufe nke na-emetụta omenala, ihe omume ebumpụta ụwa, nnyefe site na USPS gaa n'ụgbọ ụgbọ mmiri dị na obodo gị ma ọ bụ ọgụ njem ụgbọ elu ma ọ bụ igbu oge, ma ọ bụ ụgwọ mmezi, omenala ma ọ bụ nkwụghachi azụ.
DỊ mKPA: Ana ebupu iwu anyị niile si China na anyị anaghị eburu ibu maka ụdị ọrịa ọ bụla.
Rịba ama 1: Anyị enweghị ọrụ ma ọ bụrụ na ngwugwu enweghị ike ọfụma n'ihi ozi achọrọ, ezughị ezu ma ọ bụ nke na-ezighi ezi. Biko tinye nkọwa mbufe ahia ziri ezi mgbe ị na-elele. Ọ bụrụ n’ịchụta na i mehiere ihe na mbupu gị, jiri nwayọọ zitere anyị ozi na [Email na-echebe] ozugbo enwere ike.
Rịba ama 2 : Mba ọ bụla nwere ụgwọ ụtụ: ego mmadụ ga-eji malite ịtụ ụtụ maka ihe dị na ya. Taxtụ isi na ọrụ dị iche iche maka ngwaahịa ọ bụla na mba ọ bụla, onye ahịa ahụ kwesịrị ịkwụ ya.
GBANWEE N’IME ORIKA
A na-ahapụ ndị azụmaahịa ka ha gbanwee mgbanwe ka ha nyere n'iwu, within 24 awa nke ịzụrụ ihe ha na tupu iwu na-emezu. Ego ndị ọzọ ga - eweta ndị na - azụ ahịa maka mgbanwe ọ bụla emere na iwu ndị ahụ mgbe 24 awa nke ịzụrụ ihe.
Anaghị anabata ndị azụtara kagbuo ihe ndị ha zụtara mgbe enyere iwu.
Ga-arịọ nloghachi n'ime 14 ụbọchị nke ịnata ụgwọ gị.
Usoro maka iweghachi ihe:
1. Gbalịa hụ na o ruru ihe achọrọ maka nloghachi ahịa
2. Ziga anyi ozi na [Email na-echebe] na-egosi ebumnuche iweghachi ihe ahụ. Biko tinye ihe ndị a na ozi-e:
• Foto / vidiyo nke ihe ahụ dabere na ihe ahụ
• Mkpado na aha mmado
Anyị ga-aza gị n'ụbọchị ọrụ n'ime 24 elekere ma nyere gị aka ịhazi nlọghachi nke ihe azụtara.
Ọ bụrụ na a nabatara arịrịọ nloghachi gị, ị ga-akpọghachi azụ (ihe) n'ime 7 ụbọchị.
• Biko gbaa mbọ hụ na ọ bụrụ na ị na-alaghachi ngwaahịa (s), na ha kwesiri ịnọ n'ọnọdụ zuru oke, adịghị edobe ya, na-asapụtaghị na na ha nkwakọ ngwaahịa mbụ (ọ bụrụ na ọdabara)
• Onye na-azụ ahịa ji ụgwọ maka mbugharị ọnụahịa mbupu
• A gaghị akwụghachi ụgwọ mbupu mbufe ego
Ozugbo anyị nwetara ọnọdụ ahụ nke ebugharị ya, anyị ga-akwụghachi gị ọnụahịa azụma ma gwa gị site na ozi-e.
ACASPTABLE EGO EGO
Enwere ike ikwenye nloghachi gị dabere na ihe ndị a:
Ihe kpatara ya Description
Ebumnuche ebumnuche Mebiri emebi Ngwa ahịa a mebiri emebi na nnyefe
Nwere nkwarụ Ngwaahịa a anaghị arụ ọrụ dịka akọwara ya na nkọwapụta ndị nrụpụta ya
Ihe adabaghị / adabaghị Ọ bụghị ngwaahịa ngwaahịa onye ahịa nyere n’iwu (dịka nha ma ọ bụ ụcha na-ezighi ezi)
Ihe / akụkụ na-efu Ihe / akụkụ na-efu efu dị ka akọwara na nkwakọ ngwaahịa
Adaghị adaba * Onye ahịa na-anata nha enyere n'iwu mana ọ daghị.
Njehie weebụsaịtị Ngwaahịa a dakọtara na nkọwapụta weebụ, nkọwa, ma ọ bụ onyonyo aha (ihe kpatara nke websaịtị njehie / ihe na-ezighi ezi).
NWAANYI NA EGO
ANYA ANY B NA-EGO-EGO 7B XNUMX XNUMX-EGO
Joopzy.com na-ekwe nkwa na ihe ọ bụla zụtara n'aka anyị ga-agbazigharị n'ime 7 ụbọchị azụmaahịa, nkwa azụghachi azụ azụ.
Ọ bụrụ n ’i tozuru maka nkwụghachi dabere nkwụghachi ụgwọ ebuputere n’elu, ị nwere ike ịrịọ nkwụghachi na“Akaụntụ M> Iwu”Ma ọ bụ ịnwere ike iji njikọ nyere n'okpuru:
Họrọ ihe ma ọ bụ iwu dum wee pịa “rịọ nkwụghachi”Bọtịnụ. Mee ka anyị mara na ị ga-achọ nkwụghachi, na nkọwa doro anya nke ihe mere ejighi afọ ojuju na nnyefe ma bulite onyonyo ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na-akwado. Anyị ga-achọ ịma ebe ihe na-agazighị agazi ma ọ bụ otu anyị nwere ike isi meziwanye afọ ojuju ndị ahịa na ahụmịhe ọrụ. A ga-eme nyocha nke ọ bụla 1-2 ụbọchị azụmahịa. N'ihi nke a, onye ahịa ga-anata ozi email, ọ bụrụ na onye ahịa a tozuru maka nkwụghachi, mgbe ahụ nkwụghachi ahụ ga-eme dabere na nkwụghachi ụgwọ iwu ekwuputara n'okpuru.
AKW TOKWỌ TIMEB TOR TO REBARA MAKA MAKA / MAKA EGO
Ntughachi ntinye: ozugbo ihe emere nyocha nke uzu di omimi, tulee inweta ihe ahu n’ime 10-15 ụbọchị azụmaahịa site na ụbọchị anyị nwetara ozi nsuso nke ihe eweghachiri.
Nkwụghachi nhọrọ: ndị ahịa rịọrọ maka nkwụghachi nwere ike ịtụ anya inweta ya n'ime etiti oge:
Paymentkwụ gwọ (n'oge ịzụrụ) Nhọrọ nkwụghachi Oge nkwụghachi (iji hụ ego na nkwupụta ụlọ akụ gị)
Kaadị kredit / Debit Kaadị Nkwụghachi ụgwọ / nkwụghachi ụgwọ
Paypal Nkwụghachi nke Paypal (ma ọ bụrụ na ego akwụ ụgwọ) 5-7 ụbọchị azụmahịa
Nkwụghachi ụgwọ akwụmụgwọ (ọ bụrụ na a na-ejikọ Paypal na kaadị kredit) Tobọchị 5 ruo 15
Mara: Enwere ike igosipụta ego ahụ na usoro ịgba ụgwọ gị na-esote
Nkwụghachi azụ (ma ọ bụrụ na ejikọtara Paypal na kaadị debit) Bọchị 5 ruo 30 (on dabere na ụlọ akụ na-enye gị ego)